China Rakijada aan caadiga ahayn ee wax soo saaraha iyo bixiyeyaasha - warshadaha dambiisha - Rihoo Industry.
Guriga > Alaabada > Rugaha aan caadiga ahayn
RIHOO waa shirkad Shiinees ah oo ah sheyga aan caadiga ahayn, si loo keeno qalab aan caadi ahayn oo leh heerar kala duwan oo sax ah, iyo shuruudaha macaamiisha ay ku heli karaan xalalka naqshadeynta si loo soo saaro. Waxaan ka dhigi karnaa saamiyada qaar ka mid ah alaabta gaarka ah - Qalabka aan caadiga ahayn, xitaa waxaad u baahan tahay qadar yar, waxaan sidoo kale ku siin karnaa wakhtiga dhoofinta.
Rakaabka Taageerada Rakaabka Rakaabka ZKLF
Kuwa soo socda waxay ku saabsan yihiin Rakaabka Dharka Rakcadda Rakaabka ee ZKLF, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad fahamto fahamka xajmiga Rakaabka ee ZKLF.
Xidhiidhka Xisaabiyaha ee Xidhiidhka La Xiriira (Ball Bearings) ZKLN Series
Kuwa soo socda waxay ku saabsan yihiin Xidhiidhka Axial Angular Contact Ball Bearings ZKLN Series, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad fahamto fahamka Faa'iidooyinka Xirfadaha Aaladaha Dabiiciga ah ee Xiriirka Bulshada ZKLN.
Duubista Mashiinka Mashiinka
Waxyaabaha soo socda ayaa ku saabsan Ku saabsan Mawduuca Mashiinka Mashiinka la xidhiidha, Waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad si fiican u fahamto Qalabka Dharka Mashiinka.
Rakfadaha leh Wareeg Wareeg ah
Kuwa soo socda waxay ku saabsan yihiin Rakfadaha leh Ikhtiyaarka La Ballaariyey, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad fahamto Rakfadaha leh Wareegga Wareegga Weyn.
Dharbardhigyada Hoosada Eccentric
Kuwa soo socda waxay ku saabsan yihiin Bearings With Eccentric Inner Dole, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad si fiican u fahamto Rugaha leh Eccentric Inner Dole.
Rakamka Mashiinka Dharka
Kuwa soo socda waxay ku saabsan yihiin Rugaha Dharka ee Dharka, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad si fiican u fahanto Dharka Maatiinada.